laacib » Dani Alaves Iyo Neymar Jr Oo Bilaabay Olole Ka Dhan Ah Arsenal & Man City Iyo Alves Oo Alexis Sanchez Ugu Baaqay In Uu PSG Kula Soo Biiro.
Dani Alaves Iyo Neymar Jr Oo Bilaabay Olole Ka Dhan Ah Arsenal & Man City Iyo Alves Oo Alexis Sanchez Ugu Baaqay In Uu PSG Kula Soo Biiro.
Difaaca xulka qaranka Brazil iyo laacibkii PSG ee Dani Alves ayaa ka mid ah ciyaartoyda saamaynta ku yeesha xidigaha doonaya in ay kooxahooda badashaan, wuxuuna soo faro galiyay xaalada Alexis Sanchez ku haysata Arsenal iyo xiisihii Manchester City ee Sanchez. Dani Alves ayaa Alexis Sanchez kaga hor yimid kulankii xalay dhex maray xulalka qaramada Brazil iyo Chile wuxuuna fariin cad u diray Sanchez si uu PSG ugula soo biiro. Neymar Jr ayaa door wayn ka ciyaaraya in Sanchez uu PSG kula soo biiro.
Dani Alves ayaa hore heshiis ula gaadhay Manchester City laakiin waxa uu si lama filaan ah ugu biiray PSG markii ay Neymar jr isku afgarteen in ay Paris ku midoobaan laakiin markale Dani Alves ayaa doonaya in Sanchez uu isna PSG ku soo biiro. Waxay hore saxaafadu u sheegtay in Neymar jr uu doonayo saxiixyada Coutinho iyo Sanchez isla markaana uu maamulka kooxdiisa ka dalbaday.
Markii Dani Alves wax laga waydiiyay xiisaha kooxdiisa PSG ee ee Alexis Sanchez ayuu idaacada Radio ADN u sheegay: “Waa suurtogal, laakiin kooxo dhawr ah ayaa isaga doonaya. Anigu waxaan doonayaa in isagu uu faraxsanaado meel kasta oo uu tago, laakiin haddii ay anaga noqoto way ka sii fiicnaan doontaa”.
Intaa kadib Dani Alves ayaa ka hadlay sida ay wax adag u tahay in Sanchez laga horyimaado wuxuuna yidhi: “Markasta waa wax adag in laga horyimaado ciyaartoyda Alexis oo kale ah ee tayadiisan iyo heerkiisa laakiin waxaanu diirada saaraynay ciyaarta oo dhan isla markaana shaqo fiican ayaanu qabanay”.
Alexis Sanchez iyo Dani Alves ayaa hore uga soo wada ciyaaray Barcelona wuxuuna xidiga ree Brazil si cad u sheegay in wax aad u fiican ay noqon doonto haddii ay markale ka wada ciyaaraan laacibkii PSG. Heshiiska Sanchez ee Arsenal ayaa dhacaya dhamaadka xili ciyaareedkan waxaana la filayaa in suuqa bisha January ay Arsenal iska iibin karto halkii uu si xor ah kaga bixi lahaa sagaal bilood kadib.
Neymar Jr iyo Dani Alves ayaa wada olole ay Alexis Sanchez kaga saarayaan Arsenal isla markaana ay ku doonayaan in aanu Manchester City ku biirin inkasta oo laacibkii Guardiola ay bisha January isku dayi doonto in ay soo cusboonaysiiso heshiiskii maalintii suuqa ugu danbeeyay fashilmay ee ay Sanchez kula soo wareegaysay.